Ikwụghachi ụgwọ maka nbibi ụgbọ elu | Law & More B.V.
blog » Ikwụghachi ụgwọ maka nbibi ụgbọ elu
Ikwụghachi ụgwọ maka nbibi ụgbọ elu
Kemgbe afọ 2009, ọ bụrụ na ụgbọ elu egbu oge, ị dị ka onye njem adakwaghị aka na-enweghị aka. N'ezie, na mkpebi Sturgeon ahụ, Courtlọikpe nke Ikpe Ziri Ezi nke European Union gbatịkwuru ọrụ ụgbọelu ịkwụ ụgwọ. Kemgbe ahụ, ndị njem enweela ike irite uru site na ịkwụ ụgwọ ọ bụghị naanị na mmemme nke ịkagbu, kamakwa n'ihe banyere igbu oge ụgbọ elu. Courtlọikpe a ekpebiela na n'ọnọdụ abụọ ahụ ụgbọ elu nwere naanị oke nke awa atọ ịhapụ usoro ihe omume mbụ. Airgbọ elu ahụ a na-enyocha ihe karịrị ndị ọrụ ụgbọ elu, ị na-erute ebe ị na-aga ihe karịrị awa atọ n'azụ oge? N'ụdị ahụ, ụgbọ elu ga-akwụrụ gị ụgwọ maka ihe na-egbu oge.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ndị na-anya ụgbọ elu nwere ike gosipụta na ọ bụghị ya na-egbu oge na ajụjụ a, si otú a gosipụta ịdị adị ọnọdụ pụrụ iche nke na - agaraghị agbanahụ, iwu ejighị ya ịkwụ ụgwọ maka nkwụsị nke ihe karịrị awa atọ. N'ihi usoro iwu, ọnọdụ ndị a anaghị adịkarịkebe. Nke a bụ naanị ikpe ma a bịa na:
ọnọdụ ọjọọ dị oke njọ (dịka oke mmiri ma ọ bụ mgbawa ugwu na mberede)
enweghị ọkwa (dịka ndị ọrụ ọdụ ụgbọ elu)
Courtlọ ikpe ikpe anaghị ele ntụpọ ọrụ aka na ụgbọ elu ahụ anya dịka ọnọdụ nke enwere ike iwere dị ka ihe pụrụ iche. Dị ka ụlọ ikpe Dutch si kwuo, ọnọdụ ndị ọrụ ụgbọelu ahụ anaghị arụkwa ọrụ nke ndị ọrụ ụgbọelu ahụ. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, gị dịka onye njem nwere ike ịnwe ụgwọ.
You nwere ikike ịkwụ ụgwọ ahụ, ma ọ nweghị ọnọdụ pụrụ iche?
N'okwu ahụ, ụgbọ elu gị ga-akwụ gị ụgwọ ahụ. Ya mere, ikwesighi ikwenye na uzo ozo ozo, dika akwukwo ego, nke ugbo elu gi na enye gi. N'ọnọdụ ụfọdụ, Otú ọ dị, ị nwekwara ikike ilekọta na / ma ọ bụ ebe obibi ma ụgbọ elu gị ga-ekwado nke a.
Onu ogugu kwughachi nwere ike site na 125, - ruo 600, - euro otu onye njem, dabere n'ogo ụgbọ elu na ogologo oge ọ na-egbu oge. Maka igbu oge nke na-erughị 1500 km ị nwere ike ịtụkwasị obi na 250, - euro akwụghachi. Ọ bụrụ na ọ na-emetụta ụgbọ elu dị n'etiti 1500 na 3500 km, nkwụghachi ụgwọ nke 400, - enwere ike ịtụle euro ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya. Ọ bụrụ na-efe efe karịa 3500 km, ụgwọ ịkwụ ụgwọ gị maka ihe karịrị awa atọ na-egbu oge nwere ike ịbụ 600, - euro.
N'ikpeazụ, n'ihe metụtara ụgwọ a kọwarala, enwere ọnọdụ ọzọ dị mkpa maka gị dị ka onye njem. N’ezie, ịnwere ike ịnata ụgwọ ahụ maka mmebi ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ụgbọ elu ụgbọ elu gị daa n'okpuru Iwu European 261/2004. Nke a bụ ihe mere mgbe ụgbọ elu gị si mba EU pụọ ma ọ bụ mgbe ị na-eji otu ụlọ ọrụ ụgbọ elu Europe na-aga mba n'ime EU.
You na-enwe oge igbu ụgbọ elu, ịchọrọ ịma ma ị tozuru ụgwọ maka nrụrụ aka nke ihe butere site na igbu oge ma ọ bụ na ịchọrọ ịme ihe ọ bụla megide ndị na-anya ụgbọ elu. Biko kpọtụrụ ndị ọka iwu na Law & More. Ndị ọka iwu anyị bụ ndị ọkachamara na ngalaba nke igbu oge na ọ ga-enwe obi ụtọ inye gị ndụmọdụ.
Previous Post Can nwere ike ịdebanye aha ụlọ ọrụ na adreesị ụlọ ọrụ mebere?
Next Post Nsonaazụ nke ịgba alụkwaghịm maka akwụkwọ obibi gị